Fanadihadiana video an'ny ZTE Axon Elite | Androidsis
Huawei dia mitombo amin'ny maha-mpanamboatra azy noho ny fanatsarana aseho amin'ny karazany vaovao. The Huawei Mate S, miaraka amina endri-javatra mahaliana sy famaranana tena mahaliana, dia ohatra mazava amin'izany. Fa izao no fotoana hiresahana ZTE.
Ary io mpanamboatra aziatika io no nanapa-kevitra ny hanatona ny tsena eropeana aorian'ny Huawei. Manangana marika antsoina hoe Honor ny mpifaninana aminao? Eny, manolotra ny fianakavian'i Axon vaovao i Zte. Y ny fiheverana voalohany taorian'ny fitsapana ny ZTE Axon Elite dia tsy tokony ho tsara kokoa.
1 Tonga i ZTE nanitsakitsaka ny ZTE Axon Elite mahavariana
2 Ny toetra ara-teknikan'ny ZTE Axon Elite
Tonga i ZTE nanitsakitsaka ny ZTE Axon Elite mahavariana
Araka ny hitanao amin'ny horonantsary, ny ZTE Axon Elite dia a finday tena manintona. Miaraka amina famolavolana faran'izay mitandrina sy kalitao farany, ny sainam-pianakaviana vaovao Axon dia miatrika zava-mavesatra amin'ny sehatra avo lenta.
Tena tianay ny mpandahateny anoloana, tafiditra tsara eo alohan'ny terminal ary hahafahantsika mankafy atiny multimedia tsy manakana ny fivoahan'ny feo tsy nahy. Izaho manokana dia tena tiako ny fitambaran'ny vy sy ny hoditra sandoka ao aoriana, fa momba ny tsiro, ny loko.
Ny iray amin'ireo singa miavaka indrindra amin'ny ZTE Axon Elite dia ny sensor sensor misy ny faran'ny finday. Ny fitondran-tena dia mihoatra ny marina. Azontsika atao ihany koa ny mampiasa ny fakantsary ho toy ny rafitra fankasitrahana endrika noho ny haitao novolavolain'ny ZTE. Tsy maintsy ho hitantsika ny fahombiazany rehefa manao famakafakana lalindalina kokoa isika, fa amin'izao dia tena tsara izany.
Ny toetra ara-teknikan'ny ZTE Axon Elite
Fitaovana fananganana Aluminium sy hoditra faux
efijery 5.5 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana 1920x 1080 sy 401 dpi
vidiny 419 euros
Ny tena marina dia fa amin'izao fotoana izao ny ZTE Axon Elite dia namela tsiro be teo am-bavantsika. Ary raha heverintsika fa ho tonga ny 24 septambra amin'ny a vidin'ny 419 euros, manana eo alohanay izahay ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra hodinihina raha mitady finday avo lenta izay tsy mihoatra ny 500 euro ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » ZTE » ZTE Axon Elite, fiheverana voalohany amin'ny horonan-tsary